1. CRL-40,940 (Flmodafinil) vs Modafinil: Famintinana
2. CRL-40,940 (Flmodafinil) Vs Modafinil: Mekanisma amin'ny hetsika
6. CRL-40,940 (Flmodafinil) Vs Modafinil: Legalité
7. CRL-40,940 (Flmodafinil) Vs Modafinil: Ahoana no fividianana
8. CRL-40,940 (Flmodafinil) Vs Modafinil: Overview
Avy amin'ny toeram-pitsaboana mankany amin'ny sehatra ara-barotra, samy flmodafinil ary modafinil dia manaporofo fa mahomby amin'ny fanatsarana ny asan'ny kognita. Ny maha-mpampahatahotra anao-mamporisika ny mpitsidika, ny Afinils dia hanampy anao amin'ny alàlan'ny fiovan'ny seranana.
Adinoy ny IQ na ny fitaovana enti-mampianatra! Zava-mahadomelina efa hatramin'ny 30 taona izao ny hatezerana.
Fantatro fa mety hisalasala ianao hoe nahoana no tokony hipoitra amin'ny tsikirikiriotra marefo ianao raha afaka mandoa vola amin'ny amphetamine. Eny, ity lahatsoratra ity dia hanome anao ny fametrahana ny fitsaboana na hametrahana ny kafeinina mahazatra, izay tsy hampihozongozona ny kaontinao amin'ny banky.
Alohan'ny hialako amin'ny antsipiriany, tokony ho takatrao fa ny rivodoza dia tsy mahazatra fotsiny ny rafi-pitabatabana. Na izany aza, ny solosaina hafa dia mandrehitra ny fandrindrana moto. Ity lafiny iray ity dia anisan'ny antony mahatonga ny amphetamines sy ny zava-pisotro misy kafeinina manempotra ny fitsaboana krizin'ny krizy toy ny fanebahana, ny euphoria, ary ny fahaverezan-doha.
Toy izany, ahoana ny fampitahana modely vs modafinil? Andao hojerentsika.
Ny flmodafinil sy ny modafinil dia ny hoe tsyotropic mifandraika amin'ny hydrafinil, adrafinil, ary fladrafinil. Naverinay tamin'ny 1986 ny tantaran-dry zareo, rehefa nanao fangatahana taratasy tany Frantsa ny orinasa mpisava lalana, Laboratoire Lafon. Adrafinil dia vorombola ho an'ireo eugero roa.
Ireo mpikaroka Lafon dia nahitam-panafana ny mofomamy modafinil tao amin'ny 1976 rehefa nijery ny adrafinil. Navoakan'i 1994 ny orinasam-pamokarana teo amin'ny tsena raha nankatoavin'ny manampahefana Frantsay izany.
Efa-taona taty aoriana, ny Ministeran'ny Sakafo sy ny Fanafody Amerikana dia nanome fankatoavana ny modafinil amin'ny fitsaboana ny aretin-koditra. Ankoatr'izay, dia fanafody fitsaboana ho an'ny marary amin'ny aretim-pandehanana ny aretin-koditra, ny aretim-poana mandritra ny andro, ary ny hozatra amin'ny torimaso.
Mety tsy efa nandre momba izany ianao flmodafinil. Eny ary, ity no eugeroic vao haingana indrindra amin'ny vondron'olona fanafody izay nahasintona ny lohateny nanomboka tamin'ny 2013. Ny votoatiny dia nodinihina hatramin'ny 2015. Ny fidirana haingana any amin'ny clinicaltrials.gov dia manamafy fa misy ny fitsapana eo amin'ny olombelona amin'ny fitsaboana mahomby.
Ny flmodafinil dia fantatra amin'ny hoe voly CRL-40,940. Na dia toa mitovy amin'ny modafinil aza ny endriny ara-drafitra, dia misy vondrona fluorine roa mifamatotra. Io endri-javatra io dia angamba ny antony mahatonga ny flmodafinil antsoina hoe bisfluoromodafinil. Ny anarana hafa hafa dia ahitana lauflumide, bis- (p) -fluoromodafinil, ary N-deshydroxyl fladrafinil.
Ny Rohan'ny CRL-40,940 dia fantatra amin'ny laharana CAS 90280-13-0 ary ny milafinil dia ampitaina amin'ny 68693-11-8.
Hatramin'ny CRL-40,940 (90280-13-0) ary ny modafinil dia mampiseho ny vokatra azo oharina, mitovy ny fihetsika ataon'izy ireo. Ny fahasamihafana tokana ihany dia ireo vondrona roa voatanisa ao amin'ny rafitra flmodafinil, izay mampitombo ny fitiavan-tsolika tsy misy fitiavan-tena.
Ireo nootropik ireo dia miasa amin'ny sehatra neurologique manokana, anisan'izany dopamine, histamine, norepinephrine, orexine, serotonine, ary glutamate. Tsy ny fanafody entin-tanana ihany no mitazona ny dopamine indray, fa mitazona ny lanjany tsara indrindra ao amin'ny atidoha. Ny rafitra dopaminergic dia tompon'andraikitra amin'ny fifantohana ara-tsaina, ny fahatsapana ary ny asan'ny kognitive.
Ny mekanika ara-pahasalamana mazava tsara momba ny flmodafinil sy modafinil dia mbola tsy mazava, indrindra ho an'ny fitsaboana ny arcolepsy sy ny aretina torimaso. Ny CRL-40,940 dia manakana ny dopamine amin'ny filaharan'ny hypothalamus. Ny asan'ireto fananganana ny toetr'andro momba ny neurotransmitter-n'ny chimie dia miteraka fanairana, fahalemena, fampahafantarana mivoatra, fahamatorana ary fahatsarana.
samy CRL-40,940 flmodafinil Ny vovony sy ny modafinil dia mampiseho ny fiantraikany eo amin'ny neurologique. Raha ny marina, ny taloha dia avy amin'ny an'ny hafa.
Ny antony tokana nokarohin'ny modafinil dia ny fanasitranana sy fitantanana ny arcolepsy. Amin'ny lafiny ara-pahasalamana, ireo mpiasan'ny fahasalamana dia manoro azy ireo ho an'ny marary miaraka amin'ny apnea tsy ampy torimaso, ny hypersomnia, ary ny olona izay miady amin'ny fikorontanan'ny torimaso. Ankoatra izany dia fanafody fitsaboana amin'ny fibromyalgia sy ny sclérose multiplication. Ny Flmodafinil no dikan-teny farany indrindra amin'ny poofa modafinil.
Ny kapitalista sy ny moguls top ambony dia manome ireo tsy fandriampahalemana ireo mba hanatsarana ny vokatra ara-barotra. Ny fotoana manaraka dia te-hiantsoroka andraikitra mavesatra noho ny herim-po na ny torimaso, tokony hieritreritra indroa ianao. Modely iray modafinil 200mg dia ampy hahatonga anao hifoha sy hampitombo ny fahaizanao misaina rehefa miheno ao anatin'ny fiovana hafahafa ianao.
Raha toa ianao ka mpianatra manana fanadinana sarotra mialoha, dia azonao antoka fa mametraka azy amin'ny flmodafinil na ny modafinil dosage. Na izany aza, tokony marihinao fa ny FDA dia namoaka ny fampiasana ny lisitry ny fampiasana fanafody pharmaceutika.
Ny fampiasana zava-mahadomelina roa dia miteraka hery ara-batana sy ara-tsaina, mampiroborobo ny fahamailoana, ary miasa amin'ny sainao. Ny fikarohana fikarohana marobe koa dia manoro hevitra fa ny fampitomboana ny fitomboan'ny fahatsiarovan-tena dia mampitombo ny fahasalamana ara-pihetseham-po amin'ny fanatsarana ny fahatsapanao.
Ny CRL-40,940 (lauflumide) sy ny modafinil dia manana toetra voajanahary. Maro ny fanadihadiana milaza fa ny roa dia manan-danja amin'ny fahasalamana ara-boajanahary. Ankoatra izany, dia ataon'izy ireo ho toy ny dopamine ny fitaovam-pihetseham-batana, ka mahatonga azy ireo hikorontana ny saina, ny saina ary ny fitomboan'ny hery ara-batana. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mitatitra ihany koa fa ny fanafody hendry dia miasa amim-pahombiazana ho fanafody manohitra ny depression sy ADHD.
Noho izany, tsy mampiova ny vokatry ny modafinil ve ny flmodafinil?
Eny, inona no mampiavaka azy ireo ny fizotry ny toe-pahasalamana avo indrindra amin'ny flmodafinil. Ity lafiny iray ity dia nahatonga ny ankamaroan'ny mpiserasera hilaza fa ny fanafody dia mihetsika haingana. Na dia tsy misy ny famerenana ara-tsiansa aza, ny ampahany betsaka amin'ireo mpandinika CRL-40,940 Reddit dia manome valiny noho ny fanamafisany ny endrika hafa. Ny mpisera tsirairay dia mino fa ny medikaly dia fampitahàna amin'ny modafinil nentim-paharazana.
Miasa ara-dalàna ny tafika ao Angletera, Etazonia, India ary Frantsa amin'ny fampiasana ara-dalàna ny modafinil ho fomba fiasa amin'ny amphetamine malemy. Ny tafika sy ny mpanamory sambondanitra dia mitantana ny zava-mahadomelina rehefa manao asa fitoriana lava izay mety hamono azy ireo.
Ny flmodafinil sy modafinil dia misy ao anaty capsules, poids, ary tablette na fonosana pil. Noho ny vahaolana avo lenta, afaka mamotsotra mora foana ao anaty rano na solvents iray hafa ianao.
A typical modafinil dosage fifanakalozan-kevitra eo amin'ny 100mg sy 200mg isan'andro. Ny doka dia miankina amin'ny fahamendrehan'ny mpampiasa, ny fahasalamana ary ny lanjan'ny vatana. Ny mpisera sasany mpankafy dia afaka manao ny 400mg. Rehefa nanamboatra ny fanamarihana mena moddinil aho, dia gaga aho fa ny ankamaroan'ny mpampiasa dia miala amin'ny 50mg mankany 200mg.
Flmodafinil dosage dia mitoetra eo anelanelan'ny 50mg sy 100mg na dia misy olona aza manolotra izany amin'ny 200mg. Satria ny habetsan'ny biôgrafia dia avo kokoa noho ny an'ny modafinil, ny ankamaroan'izany dia mihen-danja amin'ny famokarana. Noho izany dia ambany noho ny an'ny hafa ny dosage.
Manoro hevitra aho haka indray ny zava-mahadomelina indray mandeha isan'andro, indrindra amin'ny maraina. Azo antoka fa tsy te hanakantsakana ny fihodinan'ny sikarie tsy tapaka ianao. Ataovy azo antoka ny hifanaraka amin'ny dosage prescriptions mba tsy hamerenanao ny voka-dratsiny.
Ho an'ny modafinil, ny ora fiasàna dia ora roa eo ho eo. Ny tsimokaretin'ny plasma amin'ny zava-mahadomelina dia farafahakeliny anatin'ny enina ora sy tapaka ao anatin'ny roa ora. Rehefa avy mampihatra an'io nootropic ianao, dia hivezivezy ianao mandritra ny 12 ka hatramin'ny 15 ora alohan'ny ahafahanao manomboka matory.
Ny CRL-40,940 dia mitarika amin'ny latsaky ny adiny iray sy ny tampony eo anelanelan'ny telo na enina ora. A typical flmodafinil tablet Manana tapany fohy ny fiainana. Noho izany, ny fitiliana mandritra ny alina dia hitoetra tsy tapaka. Nisy mpampiasa iray niaiky fa afaka mandrotsaka ora maromaro izy aorian'ny nandraisana CRL-40,940. Mifanohitra amin'izany, amin'ny modafinil, naharitra ora 12 ora iray izy talohan'ny nahalalany ny hatsiaka.
Raha mandalo amin'ny fanadihadiana ao amin'ny sehatra an-tserasera ianao, dia ho hitanao fa aleon'ny mpampiasa ny CRL-40,940 amin'ny modafinil satria vitsy ny voka-dratsin'ny flmodafinil. Na dia izany aza, dia tombantombana fotsiny ihany izany satria ny vokatry ny fizarana 2015 dia tsy navoakan'ny olombelona.
Ny flmodafinil sy modafinil dia mampiseho ny alahelony, ny aretin'andoha, ny hafetsena, ny rhythm tsy voatery, ary ny fihetsika manohina ny hoditra. Mety hampidi-doza kokoa ny fanehoan-kevitra mampihetsi-po raha manao fitsaboana goavambe ianao.
Raha toa ka tsy mandray ny takelaka modafinil na flmodafinil ara-potoana ianao dia mety hiady amin'ny tsy fahitan-tory. Ohatra, ny fitantanana modafinil taty aoriana ny tolakandro dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny modelinao torimaso. Azonao atao ny miambina hatrany hatramin'ny misasakalina.
Na izany aza, ny flmodafinil psychonauts dia manandratra CRL-40,940 noho ny halaviran-tsavony fohy izay ahafahan'ireo mpampiasa hampiasa ny zava-mahadomelina am-piadanana amin'ny andro.
Ankoatry ny toetran'ny fahasalamana sy ny fahalefahana, ny fanafody hafa dia mety handevona ny sasany amin'ireo fiovana ratsy ihany koa. Raiso, ohatra, modafinil interactions amin'ny fihinanana fanafody hormonal dia hampihena ny fahombiazan'ny fanafody fandrindrana ny fianakaviana. Ankoatra izany, dia hampihena ny asan'ny cyclosporine, Sandimmune, ary Theophylline ny afinils.
Ny ankamaroan'ny fitondram-panjakana dia mitaky anao hanana vidy mahazatra anao mba hividianana modafinil ara-dalàna. Noho ny tsy fahampian'ny angona, ny CRL-40,940 dia tsy misy fetrany any amin'ny firenena sasany. Ny ankamaroan'ny mpivarotra eBay flmodafinil dia mivarotra ny vovony mena ho an'ny fikarohana sy ny fianarana.
Anisan'ny fampitandremana modafinil ny ankamaroan'ny fiankinan-doha. Noho io antony io, ny USA dia nametraka izany ho toy ny fandaharam-potoana IV.
Ao amin'ny Etazonia, ohatra, ny FDA dia nandà ny orinasan'ny zava-mahadomelina avy amin'ny fampindramana modafinil noho ny fampiasana ny labozia. Ny CRL-40,940 dia tsy voafehy ao Etazonia sy Kanada, fa fanafody prescription ao Eorôpa. Noho izany, raha efa Eoropeana ianao flmodafinil psychonaut, mariho fa eo amin'ny tendanao ny lalàna.
Ny firenena hafa izay manana sokajy modafinil ho fitaovana mifehy azy dia ahitana an'i Shina, Rosia, Angletera, Japon ary Aostralia. Ho an'ireny fanjakana ireny, dia voarara tanteraka ny fananana medikaly entin-tsaina, ary mety ho tratran'ny fanakatonana ny Biraon'ny Fitsaboana. Na izany aza, raha manana ordinatera ianao, dia afaka mandehandeha manodidina scot-free.
Ao amin'ny kianja ara-panatanjahan-tena sy ara-panatanjahan-tena, ny World Anti-Doping Agency (WADA) dia nandrara ny fampiasana modafinil hatramin'ny 2004.
Azonao atao ny mahazo an'io nootropic roa na any an-toerana na any amin'ny magazay an-tserasera. Koa satria tsy ara-dalàna ny mividy modafinil any amin'ny firenena hafa, mila dokotera mendrika ianao. Noho izany dia tokony hanana antony marim-pototra hanomezanao ny fivarotan-tena ho azy ireo ianao hanolotra izany zava-mahadomelina izany.
Ny tsy fahampian'ny fividianana flmodafinil na modafinil ao an-toerana dia ny mety tsy ho hitanao any amin'ny pharmacy. Raha manao izany ianao, miangavy anao mba ho vonona ny hanapaka ny banky.
The surest loharano flmodafinil dia amin'ny mpivarotra an-tserasera. Avelao aho hanazava.
Ireo mpivarotra virtoaly dia mahalana dia mila dokotera. Ny sasany amin'ireo toeram-pivarotana ireo dia miasa any amin'ireo firenena izay manana modafinil sy flmodafinil mividy lalàna momba ny fanafody. Ankoatra izany, azonao atao ny misafidy ny hividy ny dikan-teny madinidinika momba ny zava-mahadomelina mahomby amin'ny vidiny tapakila raha oharina amin'ny safidin-tsarimihetsika malaza.
Eny ary, raha tianao ny fifandraisany tsara dia tsara, mandiniha miaraka aminay. Manome fanazavana amin'ny antsipirihanay momba ny vokatra rehetra izahay mba ahafahanao mandanjalanja ireo loza mety hitranga amin'ny fampiasana azy ireo. Ankoatra izany, afaka mitsabo ny tolotra ataonay sy ny ekipa manokan-tena izahay satria mamokatra ny vokatra miaraka amin'ny 98% madio amin'ny fitsapana HPLC.
Mankanesa ao amin'ny tranokalanay ary mankalazà amin'ny vidin'ny vidiny. Ny endriky ny volo mangatsiaka dia tena ilaina amin'ny fikarohana, raha toa kosa ny tabilao modafinil na flmodafinil dia ho an'ny fampiharana ara-pahasalamana.
Ny CRL-40,940 sy modafinil dia tsara indrindra amin'ny fitsaboana aretin-koditra. Ny ankamaroan'ny sehatra dia miatrika ny fizotry ny fitomboan'ny flmodafinil. Na izany aza, tsy nisy fianarana siantifika na fandalinana klinika nanatsara ny vokatra flmodafinil tsara. Ankoatra izany, ny orinasa patanty dia mamanay momba ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny fizarana I ny fitsarana olona.
Ankoatra ny hery, ny tombontsoa farany CRL-40,940 ary modafinil momba ny amphetamines dia tsy manandrana manala ny soritr'aretina. Ny fiankinan-doha dia latsa-paka ary tsy dia misy dikany loatra. Na izany aza, ny FDA dia nampiasa io lafiny io hanohitra ny modafinil ary nametraka ny dosie napetrakao ho tabilao 50 fotsiny.
Ho an'ny bioavailability, flmodafinil no solontsika. Izany dia atao haingana, noho izany, dia hesorina amin'ny vatany ara-potoana ho an'ny tsingerim-pifidiananao mahazatra. Tsy toy ny modafinil, ny antsasaky ny fiainana dia manomboka amin'ny ora 14, ny flmodafinil dia alaina amin'ny rafitra amin'ny ora fahavalo.
Iza amin'ireto no roa tianao? Eny, manohana mafy ny modafinil aho satria manome ny fampiatoan'ny FDA ho toy ny dokotera dokotera. Tsy toy ny flmodafinil, izay tsy misy siansa siantifika sy miorina, modafinil dia manana fampiharana ara-pahasalamana be mpahalala. Nahoana no mety hampidi-doza amin'ny CRL-40,940 ianao raha mbola afaka mamboly ao amin'ny vokatra modafinil tsara?